अर्को हप्ता एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वीको नजिक भएर गुज्रने – नासा::Leading Nepal News
अर्को हप्ता एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वीको नजिक भएर गुज्रने – नासा
एजेन्सी । ‘२००६ क्यूक्यू २३’ नाम दिइएको क्षुद्रग्रह अगष्ट १० मा पृथ्वीको अत्यन्त नजिक आउदैंछ । नासाका अनुसार क्षुद्रग्रहको व्यास १८७० फिट छ ।यो सामान्यताभन्दा ठूलो आकारको क्षुद्रग्रहमा पर्ने वैज्ञानिकले बताएका छन् । तर यसले पृथ्वीलाई कुनै खतरा नपु¥याउने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । नासाको ग्रह प्रतिरक्षा समन्वय कार्यालयमा कार्यरत लिण्डले जोनसन र केली फास्टका अनुसार यो क्षुद्रग्रहको परिपथ पृथ्वीतर्फ नभएकाले डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।जोनसन र फास्ट नासाको ‘पृथ्वीका नजिकका अन्तरिक्ष वस्तु’ पहिचान गर्ने समूहका सदस्य हुन् । यसमा मुख्यत हाम्रो सूर्य परिक्रमा गर्ने क्षुद्रग्रह र पुच्छ्रे ताराको अवलोकन गरिन्छ ।
तिनले ती वस्तुलाई अवलोकन गरेर तिनले पृथ्वीलाई ठक्कर दिने सम्भावनाको मापन गर्छन् र आवश्यक परेमा तिनको परिपथ बदल्न सुझाव दिन्छन् । जोनसनका अनुसार हाल पृथ्वीको नजिक भएर गुज्रिन लागेको क्षुद्रग्रह २००६ क्यूक्यू२३ बाट कुनै खतरा छैन । उक्त क्षुद्रग्रह मध्यम आकारको भएता पनि त्यो पृथ्वीको ५० लाख माइलमाथिबाटै टाढिन्छ । उनका अनुसार यो आकारको क्षुद्रग्रह प्रत्यक वर्ष झण्डै आधा दर्जन वटा पृथ्वीको नजिक भएर गुज्रिन्छन् । सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षुद्रग्रहको लम्बाई २१ माइल छ । जवकि त्यो आकारको क्षुद्रग्रह एकदमै थोरै छन् ।जोनसन र फास्टआबद्ध नासाको ‘नियर अर्थ अब्जेक्ट अव्जरभेसन्स प्रोग्राम’ले एक किमीभन्दा बढी व्यास भएको झण्डै ९०० वटा क्षुद्रग्रह पहिचान गरिसकेको छ ।
क्षुद्रग्रह जति सानो भयो त्यसको संख्या त्यति धेरै हुदैं जान्छ तर साना क्षुद्रग्रह हाम्रो वायुमण्डलमा प्रवेश गरेपछि जलेर नष्ट हुन्छन् । कुनै कुनै अवस्थामा मात्र जलेर बाँकी भाग पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्छ ।सन् २०१३ मा ५५ फिट व्यासको उल्कापिण्ड पृथ्वीको सतहको केहीमाथि विस्फोट हुदाँ रुसमा हजार मानिस घाइते भएका थिए । पृथ्वीको नजिक भएर जाने २००६ क्यूक्यू२३ जत्रो आकारको क्षुद्रग्रह यदी पृथ्वीमै आउने हो भने त्यसले एउटा सानो स्तरको देशमा क्षति पु¥याउन सक्छ । जोनसनका अनुसार त्यस्तो आकारको क्षुद्रग्रह पृथ्वीको सतहमा थोरै मात्र आएका छन् । त्यस्तो घटना दुई तीन सय वर्षमा एक पटक जसो हुने देखिको छ । र नासाले यस्ता हरेक जसो क्षुद्र ग्रहलाई पहिचान गरेर नष्ट गर्ने प्रविधि विकासतर्फ अघि बढी रहेको छ ।
जस्तो नासाले २००६ क्यूक्यू२३ क्षुद्रग्रहको सन् १९०१ देखि सन् २२०० सम्मको परिपथको तथ्याङ्क राखिसकेको छ ।यदी कुनै ठूलो क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ आएमा नासाले अन्तरिक्ष अभियान संचालन गरेर त्यसलाई फरक बाटो मोड्ने योजना छ ।फास्टले हालसम्म पहिचान भएका मध्य कुनै पनि क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ हानिएको नभए पनि अहिलेसम्म पहिचान नभएको कुनै क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ आउन सक्नेसम्भावनालाई भने नकार्न नसकिने बताइन् ।हालसम्म हाम्रो निगरानीमा नआएको क्षुद्रग्रहको हामीलाई चिन्ता छ,’ फास्टले भनिन् ।
यस्तो रहनेछ आगामी तीन दिनको मौसम, सचेत रहौँ….
मोबाइल चलाउदै हुनुहुन्छ ? एकपल्ट अबश्य पढ्नुहोस..
यस्तो हुनेछ आगामी तीन दिनको मौसम….
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी २४ घण्टाका लागि दियो यस्तो चेतावनी !
यस्तो रहनेछ आगामी तीन दिनको मौसम !
नेपाली नानो स्याटेलाइटले सुरु गर्यो यस्तो कार्य..
फेसबुक र ट्वीटर चलाउँदै हुनुहुन्छ ? साबधान! यस्तो गरे परिएला ५ बर्ष जेल..